IIKHABHATHI EZINGAMA-29 EZICREAM ZEKHITSHI (IIMBONO ZOYILO) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Iikhabhathi ezingama-29 eziCream zeKhitshi (iiMbono zoYilo)
Iikhabhathi ezingama-29 eziCream zeKhitshi (iiMbono zoYilo)
Le galari inezinto ezintle iikhitshi zekhitshi. Kulabo bafuna ikhitshi yesiko lendabuko, umbala wekrimu usetyenziselwa ukuhambisa ubushushu kunye nobuhle obuthandwayo ngabanini bamakhaya abaninzi. Kuba ifana ngokusondeleyo emhlophe, iikhabhathi zekhitshi zekhitshi zinokudityaniswa nayo nayiphi na enye imiphezulu yeetafile yombala, i-flooring okanye i-backsplash eneziphumo ezilungileyo. Nazi ezinye izimvo zekhrimu yekhitshi yokuphefumlela uyilo lwakho lwangaphakathi.
Le khitshi yakudala emfanekisweni ongentla inezinto ezenziwe ngeplanga yeplanga eyenziwe ngeplanga. Isiqithi esikhulu sekhitshi sineempawu ezintle ezibhalwe kwiikholam zaseKorinte kwiikona zaso kwaye sine-countertop yamatye eCrema Marfil kunye nekhandlela elikhulu lekhandlela elineenkcukacha zesilingi. Iingcango zaseFrance ezisecaleni zizisa ubuhle bexesha lasebusika kwaye iithoni ezipholileyo zekhephu zifudunyezwa ziithayile zaphansi ezinombala okhilimu kunye neethayile ezincinci ezisikiweyo zethayile yamatye e-backsplash.
Ikrimu ngumbala ongaphantsi komgangatho wamakhaya amaninzi. Iphantse yafana nokucaca okanye ngokwesiko, uninzi lwabayili bamakhaya alusilelanga kukuphakama nokuguquguquka kokusebenzisa ukhilimu, ngakumbi ikhitshi, yenye yezona ndawo zixakekileyo ekhaya.
Ngenxa yokuguquguquka kwayo, iikhabhathi zekhitshi zekhitshi zinokusetyenziselwa nasiphi na isitayile, ukusuka kwiNdabuko, iAntique, iNeo-Classical, uyilo lwale mihla kunye nolwexesha elizayo. Ukusebenza njengombala omkhulu wesiseko, ngesiqhelo kwiikhabhathi, iikhitshi zinokufakelwa ukugqitywa kwendalo okunje ngomthi kunye nentsimbi kwilizwe elingaphezulu, ebhaleni okanye kwimbonakalo ye-rustic. Inokuthelekiswa nemibala ye-pastel kunye nemithi ekhanyayo ekhitshini enje ngendlu okanye ikhitshi yesiko, kwaye inokudityaniswa nokufakwa kwesinyithi ngaphandle kwentsimbi okanye umbala oqaqambileyo wokuqaqambisa uyilo lwale mihla nolwexesha elizayo.
izipho zeendwendwe emitshatweni
Kuyafaneleka ukuba ukhilimu ufumaneke kwizinto ezininzi ezahlukeneyo kunye nokugqitywa, nokuba ngaba ipeyinti yeepaneli zeenkuni, i-laminates phezu kweebhodi ze-MDF, i-countertops yamatye, iitera ze-porcelain ze-backsplash kunye nomgangatho, okanye umbala wezibane ze-centerpiece. Olu luhlu kwizixhobo ezinombala wekhrimu kunye nezixhobo zalo luyinika uluhlu olubanzi, luvumela abayili ukuba babe bhetyebhetye xa besebenzisa kuyilo lwabo.
Eyona nto ibaluleke kakhulu, ukhilimu ngumbala omkhulu obamba ilanga, ngakumbi xa ubekwe ngefestile enkulu okanye emnyango. Iyakhanyisa kwangoko ekhayeni, nokuba kubekwe imibala emnyama okanye ukugqitywa ecaleni kwayo. Ikwayindlela entle yokuqalisa amakhaya kunye neekhitshi ezisengumsebenzi oqhubekayo, kuba ukungathathi cala kwayo kwamkela uyilo olutsha okanye imibala ebengezelayo, endaweni yokubahlukanisa kwaye ingavumeli ikhitshi ukuba likhule ngakumbi kwigumbi lokufikelela.
Iingcamango zeCream Kitchen
Indawo entle evulekileyo egumbini lokuhlala elingena ekhitshini kunye nekhabhathi zekrimu likhangeleka limema kwaye lihle. Ngesiqithi esikhulu sekhitshi esine-marble slab counter kunye nendawo yokutya kwasekuseni ehleli esi sithuba sibonelela ngeendawo ezininzi zokuzonwabisa kunye nokuzonwabisa. Ukugqitywa okunje ngemiqadi yeplanga evulekileyo, uluhlu lwesiko, ukukhanya kwesibhakabhaka esibukhali, kunye nekhabhathi yeminyango yeglasi inika eli gumbi isibheno esihle.
Eli khitshi lihle elinekhrim linethoni entle ngomthi omnyama kunye nentsimbi eyenziwe. Ngazo zonke iikhabhathi kwiithowuni zekhrimu kunye neepaneli eziphakanyisiweyo, ii-cornices kunye neeplanga zomgangatho zikumthi omnyama otyebileyo, njengoko kunjalo ngeziseko zesiqithi esiphindwe kabini sekhitshi.
Epakishwe ngegranite etyebileyo emdaka, esinye isiqithi sisebenza njenge-nook yesidlo sakusasa kwaye sine-antique yesitayile sesibane, ngelixa esinye sinesitya sokuhlambela intsimbi. Kwicala, ifestile encinci yokutyela i-nook inikwa umtsalane wekhaphethi yendawo enamaqhina kunye neefestile ezimhlophe ezimhlophe ezizisa ukukhanya okuninzi.
Le khitshi yemveli ijolise ngakumbi kwiklasikhi, imibala engathathi hlangothi, ukuqala ngeekhabhathi eziphakanyisiweyo zepaneli ezipeyintwe ngethowuni yokhrimu. Zonke ezinye iindonga, iithayile zangaphantsi komhlaba kwi-backsplash, kunye neefestile ezi-mullioned zikwimhlophe emhlophe, zibonelela ngemigca ecocekileyo necacileyo. Itafile enkulu yemarble yaseCarrara kwisiqithi sasekhitshini ikwabonelela ngokungagungqi kodwa kugqitywe kwendalo, ngelixa umgangatho omnyama omdaka omnyama ubonelela ngokufudumala. I-candelabra ye-lampshabra ngaphezulu kwesiqithi sasekhitshini kwaye ngefestile i-nook inika ubushushu kunye ne-antique vibe.
Eli khitshi linethowuni yokhrimu lithatha inkangeleko yanamhlanje, kunye nefriji yentsimbi engenasinxibe efrijini eneminyango ebandayo kunye nentsimbi engenanto engenanto engeniswe ngeglasi. Ukongeza, iiglasi ezicocekileyo zefestile zaseFrance kwindawo leyo, iithayile ezinkulu ezimhlophe ze-porcelain kunye neendlela zangoku ezimdaka ngombala ezenziwe ngofele zongeza kwimbonakalo yanamhlanje. Njengentlonelo ekhitshini lesiko lesiqhelo, ikhandlela yekristale ixhonywe ngaphezulu kwetheyibhile emhlophe yequartz yesiqithi sasekhitshini esisekwe kwiphaneli emhlophe.
Imibala ethambileyo nengathathi hlangothi ihlala ikhetha ngokugqibeleleyo kuso nasiphi na isikimu yoyilo lwekhitshi. Ikhitshi evulekileyo yekhitshi inombonakalo weklasikhi ngokudibanisa iingcango zesitayile esineendlela ezilula nezicocekileyo zekhabinethi yeShaker. Isitayile saseFransi esingaphambi kweglasi siphula i-monotony yoyilo kwaye sinika ibhalansi kwizixhobo zentsimbi ezingenazingcingo ezakhelwe ngaphakathi kwikhabhathi.
Umgangatho oqinileyo womthi oqinileyo kwithoni ephakathi yokubhangqa kunye netafile yokutyela eyenziwe ngomthi kunye neetoni emnyama yesiqithi esiphambili unika eli khitshi uvakalelo olufudumeleyo, olufudumeleyo nolwamkelayo. Ifenitshala yale mihla, izibane ezixhonyiweyo ngaphezulu kwesiqithi sasekhitshini kunye nekalika yekristale ngaphezulu kwetafile yokutyela zinika ubuhle kolu luyilo lwangoku lwekhitshi. Izinto ezongezelelekileyo zokusebenza zongezwe ngokubonelela ngendawo yokusebenza eofisini yokwenza umsebenzi wasekhaya, uphando okanye amanye amaphepha.
Abanini bamakhaya abaninzi bakhetha oko iikhabhathi ezimhlophe ezindala ngenkangeleko ecocekileyo ekhitshini labo. Kodwa ngokusebenzisa umbala okhanyayo wekhilimu wasemhlabeni, imvakalelo efudumeleyo kunye neyonwabisayo isenokufezekiswa. Eli khitshi linobunkunkqele linesiqithi esikhulu somthi weplanga kwithoni emnyama yokugqiba kunye ne-beige granite ephezulu eqhubeka kwiikhabhathi zekhawuntari.
Uyilo oluqhelekileyo lwekhabhinethi, ukukhanya kwe-ceramic tile backsplash kunye nokusetyenziswa kwamatye emvelo kwongeza ubuhle kule khitshi enkulu yanamhlanje. Izibane ezijingayo ezinesitayile ngaphezulu kwesiqithi kunye nezixhobo zentsimbi ezingenasici zizinto ezifanelekileyo zokubandakanya uyilo loyilo.
Eli khitshi libonisa iikhabhathi zepaneli eziphakanyisiweyo kunye neekhabhathi zeglasi ezimenyezelayo ngombala omhlophe ongacacanga, ngesiquphe ugunyaziswe yitafile yamatye egranite emnyama yesiqithi sasekhitshini. Iindonga ezijikeleze eli khitshi limile njengo-U zikwakhombisa iphepha lodonga olukhilimu kunye nolumhlophe, kunye neeplanga zomthi ezirhabaxa ezisetyenziselwa ukubopha umgangatho ndawonye. Isilingi nayo inemitha evulekileyo eneekona ezimhlophe ezicokisekileyo.
Le khitshi ineekhabhathi ezinombala okhilimu ezinezibambo zentsimbi emnyama. I-Cream ikwasetyenziswa ekubunjweni okuhle kwe-arch ngaphezulu kwefestile yokuhlamba isitya kunye nomgaqo kaloliwe ongaphezulu kwe-hood. Indawo esembindini, ene-trio yamacici eglasi, yenziwe ngesiseko somthi esikhathazekileyo kwiithoni eziluhlaza kunye nemizobo yeNeoclassical kunye necwecwe lekalika legranite. Imigangatho yeethrafine ehloniphekileyo ebekwe kwikhosi engaqhelekanga idibanisa zonke izinto zekhitshi elinemibala yelizwe ekhitshini.
Le khitshi yendabuko i-luxe inezinto ezinekrimu ezinemibala ephakanyisiweyo yekhabhathi, iidrowa kunye neearchitraves ezihambelana nezixhobo zobhedu ezihonjisiweyo kunye nee-cornices. Imiphezulu yeetafile ibonisa ukugqitywa kwamatye emarmore emhlophe ka-Augusta kwaye isiqithi sasekhitshini senziwe ngobhedu olukhulu kunye nekristale. I-backsplash ibonisa ukhetho lweetayile ezigqityiweyo zelitye xa i-flooring ikwi-tile yamatye ehloniphekileyo ebekwe ngokulandelelana. Ii-accents ngombala ohlaza okwesibhakabhaka eMorocca ziyabonakala kwindawo encinci yombhoxo ngaphakathi kwekhitshi emile njengo-U kwaye ziphindaphindwe kumakhethini yindawo yokuhlala.
Umnyango wepeyinti we-diy
Uyilo olulula kodwa oluhle lubonisa iikhabhathi zekhitshi zekhitshi ezigqityiweyo, ii-cornices, iileyili zepleyiti, kunye nefriji enkulu eneminyango emibini enesitayile esenziwe ngendlela efanayo. Iithoni ezikhanyayo zeekhabhathi ziyanqunyanyiswa ziithayile ezifudumeleyo ze-beige backsplash kunye neepaneli ezimnyama zomthi kunye neebraki ezimile okscroll ezisetyenziselwa isiseko sekhitshi lesiqithi. Iitafile zikwimabhile yegolide yeCalacatta, indlela egxininisa ngayo kwiithayile ezimhlophe ezisemgangathweni ezisetyenziselwa ukutyibilika.
Le khitshi entle yaselwandle yasekhitshini ineekhitshi ezilula ezinemibala ephakanyisiweyo eneziphatho zesilivere ezincinci kunye ne-backsplash emhlophe emhlophe. Uyilo lwesicwangciso esivulekileyo sasekhaya sinje ukuba ibha enekhitshi emile okwe-L ejongene nembonakalo yeefestile ezinkulu zemifanekiso kwindawo yokuhlala kwaye ijonge ukubonwa okuhle kolwandle. Umbono wolwandle uboniswe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka osetyenziselwa udonga, olunika ikhitshi ucoceko, indlu yasekhaya. Ezinye izinto ezinegalelo kwisitayile ziithayile zekhitshi ezimhlophe ezihambelana nomda weetayile ezimnyama ezijikeleze isiqithi sasekhitshini. Ukuma ngaphandle kwekhitshi enemibala ekhanyayo yigreyite engwevu esetyenziselwa imiphezulu yeetafile.
Le khitshi yohlobo lwendabuko, kunye nekhabhathi yayo ephakanyisiweyo yokhilimu kunye neeshelfu ezenziwe ngeglasi zihlanjwa ngokukhanya okufudumeleyo, okukhanyayo kwegolide kumbala omhlophe ofudumeleyo phantsi kwesibane sekhabhathi esifakiwe. Ngaphandle kokukhanya okuhle okubangela, phantsi kwesibane sekhabhathi sisebenza ngokukhanyisa izithuba zomsebenzi onzima kumanqwanqwa amnyama egranite. Iithayile ezincinci ezimdaka ze-porcelain ze-backsplash zikwasetyenziselwa umgangatho, kwaye isiqithi esikhulu sendawo yasekhitshini enendawo yokuxhoma inika indawo eninzi yokupheka, ukulungiselela ukutya, kunye nokuhlalisana.
Eli khitshi lanamhlanje linemigca ecocekileyo, emgceni kunye nekhabhathi ekhitshini enemibala ekhilimu kunye neetreyiti ezinezibambo ezigqityiweyo ze-chrome. I-White yayisetyenziselwa umbala osisiseko weendonga, i-backsplash yethayile kunye neetafile ezimhlophe ze-quartz. Izinto ezigqityiweyo ezenziwe nge-chrome ezigqityiweyo kunye nezixhobo zokusebenza zongeza kwi-vibe yanamhlanje kunye neebarsto ezimnyama zala maxesha kunye neenkuni ezikhanyayo ezigqityiweyo emnyango. I-tile ye-beige ebonakalayo esetyenziselwa ukudibanisa i-flooring yonke ikhitshi enemibala ekhilimu kunye kunye nokubonelela ngokufudumala.
Le khitshi yendabuko iza nekhabhathi ephakanyisiweyo enemibala ehambelana ne-off-white tile tile backsplash ekhanyiswe phantsi kwezibane zekhabhinethi. Imiphezulu yeetafile yekhitshi emile njengo-L ikwindawo ekugqitywe ngayo ngamatye e-beige, kwaye ithwele isitya sokuhlambela isitayile sendlu yasefama ngefestile, enesitayile se-antique esenziwe ngesibane sensimbi. Inkuni efudumeleyo igcwalisa ukukhanya kwemibala yekrimu kumgangatho weplanga womthi, umnyango wekhitshi kunye neenkuni ezisetyenziselwa indawo ehonjisiweyo kunye nesiseko sesiqithi sekhitshi. I-countertop yesiqithi sekhitshi nayo iza kwilitye lesepha elimnyama.
Le khitshi yakudala inekhabhathi ephakanyiswe ngombala ekhabhathi kunye neetreyini ezinezibambo ezimnyama zesinyithi ezihambelana neesetetiki zentsimbi zombhobho wokuhlamba isitya esimnyama. I-backsplash kunye ne-countertops nazo ziza kwi-shades ye-beige, kunye ne-countertop yamatye kunye neethayile ze-sandstone kwi-backsplash. Isandi somthi esimnyama sasisetyenziselwa ukutyibilika kumgangatho waphantsi ngelixa ikristale ye-antique yekristale kunye nobhedu ilenga ngaphezulu kwebhentshi yesiqithi ekhitshini emile njengo-L.
Le khitshi yakudala isemazantsi ifaka imizobo emihle yemidiliya ebekwe phezu kwendawo yokuhombisa ye-architrave ejolise ngaphezulu kwesitovu sensimbi esingenasici kunye ne-marble subway tile backsplash. Ngapha nangapha kukho iidrafti zangaphantsi ezihlanganisiweyo kunye neglasi ezixhonywe iikhabhathi ezixhonyiweyo kumbala wekhrimu entle. I-countertop yeli candelo yindawo emnyama yelitye lesepha encediswa lilitye le-beige lenyengane elisetyenziselwa isiqithi sasekhitshini esibonisa isinki yendlu yasefama. Isilingi yekhitshi iveze imiqadi ephathwe ngebala elimnyama leenkuni elihambelana nesitayile se-antique esikhanyise isibane sesinyithi esixhonywe ngaphezulu kwesiqithi sasekhitshini.
Le khitshi yemveli ilula iqala ngombala omhlophe ngaphandle kweekhabhathi zephaneli kunye nedrowa enezibambo ezincinci ezigqityiweyo ze-chrome. Umdlalo wee-countertops zemarble weCalacatta kunye ne-tile emhlophe emhlophe kunye negrey esetyenziselwa i-backsplash kunye ne-tinge encinci eluhlaza esetyenziselwa udonga lwekhitshi. Umthi ofudumeleyo nobunzima obusetyenzisiweyo wawusetyenziselwa iiplanga zomgangatho ukuba zisebenze njengezinto ezinobunzima kwimibala ekhanyayo ejikeleze ikhitshi. Ikhitshi isand ine-chandelier yobhedu ye-antique.
Eli khitshi li-rustic lidibanisa iidrowa eziluhlaza zomnquma kunye neekhabhathi kwisiqithi sasekhitshini kunye nekhabhathi yamabala aphakanyisiweyo enombala kunye neetreyini eludongeni ezixhonywe iikhabhathi. Uphahla lubonisa imiqadi yeplanga enzima, evulekileyo ekugqityweni komthi omnyama kunye nentsimbi eyenziwe ngentsimbi yokuhombisa ikhandlela.
Ezi ziqithi zibini zikhathazekileyo zinezixhobo zemithi zegranite kwaye zihlala ekhitshini elinomgangatho omnyama, omdaka. Inkangeleko yokudakumba inika uyilo a isiqithi somthi esibuye safunyanwa isitayile esinika ubuhle kunye nomlinganiswa.
Le khitshi yendabuko ineekhabhathi ezinombala we-beige enepaneli ephakanyisiweyo iikhabhathi zezindlu zasefama . Izixhobo zensimbi ezingenasici zinqunyanyiswa kwi-casework enkulu, ngelixa ii-beadboard ezimhlophe zibekwe phantsi kwekhitshi yesiqithi sekhitshi kwilitye le-beige lenyengane. I-tile ye-sandwich ye-beige isetyenziselwa i-backsplash ekhitshini kwaye ibonakaliswe njengetayile enkulu yomgangatho. Iibarstool ezimdaka ngombala ezimnyama zongeza ubushushu kunye netoni yetropiki ekhitshini.
Le khitshi intle inezinto ezininzi zobhedu eziqala ngesitya setyhula sokuhlambela esidala esinombhobho wokukhwela owenziwe kwisiqithi sasekhitshini. Isiqithi sasekhitshini sibuye sikhanyiswe ngetriyiti yezibane zeglasi zefestile ezingapheliyo kwaye zigqitywe ngekhandlela elimnyama lesinyithi ngaphezulu kwetafile yokutyela ngefestile enkulu yaseFrance. Ukugqitywa kweenkuni ngombala wekhrimu kwiidrowa kunye neekhabhathi zikwasetyenziswa kuloliwe wesipleyiti kunye nezibiyeli ezimilise okokuhola ngaphezulu koluhlu lwendawo. Ngaphantsi koko, izibane ezimhlophe ezifudumeleyo zikhanyisa i-backsplash ye-basket-weave tile.
Iikhabhathi eziphakanyisiweyo ezinombala wekhrimu kule khitshi yesiko lendabuko zikwisiphelo esinye njengokuphakanyiswa kwepaneli kunye neebakaki ezimilise escroll ezisetyenziswa kwisiqithi sasekhitshini. Isiqithi sasekhitshini sihonjiswe ngezitena zentsimbi ezine ezenziwe ngombala obomvu kwaye sijamelene nomphambili wamatye wegranite omnyama. Itafile emnyama ibalwa ziithayile ezinemibala eqaqambileyo esetyenziselwa ukubuyela umva. Ukugqitywa kweenkuni ezifudumeleyo kumgangatho weplanga ozisa ubushushu kunye nokukhanya kwindawo ye-monochrome.
Ixabiso eliphakathi leentyatyambo kwimitshato
Le khitshi yemveli iqala ngenqanaba lesithathu lesidlo sakusasa esinee-cabinetry ezimhlophe eziphakanyisiweyo kunye neetafile ezimnyama ze-quartz ezisetyenziswa njengekhawuntara, ibha yesidlo sakusasa kunye nendawo yokuhlambela. Lo mmandla ugqitywe ngezibane zesilingi ezimnyama zorhwebo. Ukwahlulwa ngumgangatho weplanga omthubi, elinye icala lekhitshi linamakhabhathi aphakanyisiweyo anemibala ekhrimu, iidrowa kunye nophahla lwe-hood nge-mosaic tile backsplash. Isiqithi esisembindini sithatha ithoni eyahlukileyo, sisebenzisa umthi omnyama kwisiseko saso kwaye sikhuphe ngetreyithi yamatye egreyite ngamachokoza.
Le yesiko off Ikhitshi elimhlophe lelizwe iza nekhitshi ephakanyisiweyo enemibala ekhrimu kunye needrowa. Oku kugqitywa kwasetyenziselwa ii-arched coves ngaphezulu kwefestile kunye noluhlu lweebhodi kunye nomgaqo kaloliwe ohamba nayo ngaphezulu kwayo. Isetyenziswe kwizibiyeli ezimile okokuhombisa ezisekwe kwitheyibhile yekhitshi enamachokoza egreyite, amaziko ekhitshi ajikeleze ikhandlela elikhanyayo lesibane elixhonywe eluphahleni. Ukongeza imfudumalo, iithayile ezimnyama ze-beige zazisetyenziselwa ukubuyela umva ekhitshini, ngelixa umthunzi okhanyayo wawusetyenziselwa iithayile zomgangatho.
Isiqithi sekhitshi se-beige esinamachaphaza egolide sibanjwe sisiseko somthi esimnyama esineziseko. Nangona inelitye elifanayo le-beige granite, izakhiwo ezakhiweyo emacaleni ekhitshi zibonisa iikhabhathi ezimhlophe eziphakanyisiweyo zepaneli kunye needraw kunye nodonga olunombala okhilimu. Le granite enamabala amnyama nayo yayisetyenziselwa ukubuyela umva kwaye yayicinywa yitayile ye-porcelain ekhanyayo yomgangatho.
Le khitshi emile u eneekhabhathi zekrimu inefriji edityanisiweyo kunye nesiqithi esikhulu se-beige granite counter. Imigangatho eqinileyo yomthi onzima kunye nophahla lwetreyi yobhedu lweediliya unika eli gumbi ubushushu obuhle obufudumeleyo. Umbala wesikwere sombala we-backsplash ubonelela ngokuqhubeka kwaye utshatise amagumbi uyilo lobugcisa.
Eli khitshi ligcina ikhitshi liqala ngekhabhathi ekhitshini ekhitshini ekhitshini kunye nabadwebi abanezinto ezilula zokugqiba i-chrome kunye neetafile zelitye legranite ezinemibala yodonga lwangasemva.
Iithayile zendlela emhlophe e-diagonally efakwe kwi-backsplash, kumgangatho omnyama weplanga, kwi-countertop yamatye amnyama kwisiqithi sasekhitshini eside kunye nesiseko sayo somthi esihamba ngombala ongwevu zizinto ezigciniweyo eziqhelekileyo ezenziwe kwifashoni yangoku. Umnyango wongqameko omncinanana otyibilikayo onentsimbi kaloliwe omnyama kunye neetrio zokuxhoma iintsimbi zentsimbi ngaphezulu kwesi siqithi ziyaqhubeka zibonisa obu bugcisa beContemporary.
Leli khitshi lePhondo laseFransi elihonjiswe ngekhilimu kunye negolide elenziwe ngekhabhathi lenza ingxelo entle. Iikhabhathi zeminyango yeglasi, ifriji efihliweyo, kunye noluhlu lwesiko ngaphezulu kwesiqithi esinentsimbi esingenasici zizinto nje ezimbalwa zeempawu zokuma kolu loyilo.
Le khitshini yanamhlanje ibonisa iikhabhathi zekhrimu ezimenyezelayo ngetheyitile yequartz kunye nezibane ezihonjisiweyo. Umgangatho wethayile yomthi kulo lonke eli thuba unika umahluko omkhulu. Ngelixa izixhobo zokuphela eziphezulu kunye nesiqithi esingaphezulu kwekhitshi zibonelela ngobuninzi be-og ephezulu.
izipho ezivela kumtshakazi ukuya kumyeni ngosuku lomtshato
ndinganxiba mnyama emtshatweni
app njenge tinder yomtshato
ngenxa yokuba izipho zomfazi
zingaphi iingoma ofuna umtshato
iglasi yomkhwenyana nomyeni